14 နေ့ Keto စိန်ခေါ်မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Keto » 14 နေ့ Keto စိန်ခေါ်မှုဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ 14 နေ့ Keto စိန်ခေါ်မှု အရောင်းရဆုံးစာရေးသူနှင့် CISSN အသိအမှတ်ပြုအာဟာရဆရာ Joel Marion မှဖန်တီးခဲ့သောအစားအစာအစီအစဉ်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်အွန်လိုင်းရှာဖွေနိုင်သောထူးခြားသော ketogenic အခြေခံအစားအစာအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအစာသစ်အစီအစဉ်ကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်ပတ်ပြီး ၂ ပတ်အကြာမှာအဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည့်စက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်။ ဤအစီအစဉ်သစ်သည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိဘိုဟိုက်ဒရိတ်များစားသုံးမှုကိုလျော့ကျစေပြီးဖော်ရွေသောအဆီများကိုတိုးစေသည်။ ဤအစီအစဉ်သစ်တွင်အထူး“ super fats” အုပ်စုတစ်စုအကြောင်းလေ့လာပြီး၎င်းအဆီများသည် ၁၄ ရက်အတွင်းပေါင်ပိုလျှံခြင်းကိုမည်သို့ကူညီနိုင်မည်ကိုလေ့လာလိမ့်မည်။ “ ဆူဝသောအဆီ” ဟုခေါ်သောဤအရာအချို့တွင်ဘေကွန်၊ ထောပတ်၊ အဆီနီသောအသားနှင့်ကြက်ဥအနှစ်များကဲ့သို့သောအကြိုက်ဆုံးများပါဝင်သည်။ ဒီ ၁၄ ရက်တာစိန်ခေါ်မှုအသစ်ဟာ Atkins နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဒါကရိုးရာ ketogenic အစားအစာအစီအစဉ်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။
ရိုးရာ keto အစားအစာသည် ketosis ဟုခေါ်သည်။ Ketosis သည်ဇီ ၀ ဖြစ်စဉ်အခြေအနေဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးများရှိ ketone အလွှာများမြင့်မားစွာဖြင့်ဖော်ပြသည်။ သင်၏ကာဗွန်စားသုံးမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးပြီး၊ ဤ carbs များနှင့်သင့်တော်သောဖော်ရွေသောအဆီများဖြင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ရိုးရာ keto အစားအစာသည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလောင်စာဆီအတွက် ketones ထုတ်လုပ်ရန်တွန်းအားပေးပြီးသင်၏စွမ်းအင်အတွက်အဆီကိုထိရောက်စွာလောင်ကျွမ်းစေသည်။ ကောင်းပြီလား ကောင်းပြီဒီဟာကအဓိကအားနည်းချက်ပဲ။ ဒါက keto အစားအသောက်အစီအစဉ်မစတင်မီလူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါကို Keto flu လို့ခေါ်တယ်။
အဆိုပါ Keto တုပ်ကွေးကဘာလဲ?
keto flu သည်အင်ဆူလင်ဓာတ်နည်းသော ketogenic အခြေခံအစားအစာအစီအစဉ်စတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်တုပ်ကွေးကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ keto flu သည်လူတစ် ဦး တွင်အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အစာကြေခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်သတ္တုချို့တဲ့ခြင်းစသည့်ပြင်းထန်သောပြissuesနာများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ နှင့် 14 နေ့ Keto စိန်ခေါ်မှု Keto တုပ်ကွေးရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ သမားရိုးကျ keto အစားအစာ၏နောက်အားနည်းချက်မှာတစ်ခါတစ်ရံလူတစ် ဦး သည်စစ်မှန်သော ketosis ဝင်ရန်တစ်လခန့်ကြာနိုင်သည်။ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်တစ်ပတ်အတွင်း ketosis သို့ဝင်နိုင်လျှင်ပင် keto flu မှတပါးအကြီးမားဆုံးပြissueနာမှာသမားရိုးကျ keto အစီအစဉ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မရှိသောကြောင့်ရေရှည်တွင်အမြဲတမ်း ketosis အခြေအနေသို့ရောက်ရှိခြင်းသည်လက်တွေ့မကျပါ။ ၎င်းသည်လက်တွေ့မကျသည့်အပြင်အမြဲတမ်း ketosis အခြေအနေသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရေရှည်မကျန်းမာပါ။
14 Day Keto Challenge အစားအစာအစီအစဉ်သည်ရိုးရာ keto အစားအစာအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ketone ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးသင် ketosis ကိုအမှန်တကယ်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းကြားတယ် အားလုံး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်လုပ် ketones ၏အံ့သြဖွယ်အကျိုးကျေးဇူးများ မရှိဘဲနဲ့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ketosis အတွက်ဖြစ်ခြင်း။
သမားရိုးကျ keto အစားအစာအစီအစဉ်တွင်သင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုသည် ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်း၌ carbs မစားသောဂလူးကို့စ်မရှိခြင်းကြောင့်နှေးကွေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်ဟော်မုန်းများပြproblemsနာဖြစ်စေသည်။ ဤပြproblemနာ၏အဖြေမှာသင့်လျော်သောအချိန်၌“ keto carbs” ကိုစားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို7Day Keto Challenge အစားအစာအစီအစဉ်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီအစားအသောက်အစီအစဉ်နဲ့သင် keto carbs ဟာအဆီကိုဘေးကင်းစွာနဲ့ထိရောက်စွာလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ဖို့အတွက်သင့်ရဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှာပါ။
THE 14 နေ့ KETO အခက်အခဲအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ:
သင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တိုးတက်စေရန် keto အခြေပြုဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုစားရန်လိုအပ်သည်။ ဒီ ၁၄ ရက် keto စိန်ခေါ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာ -
- အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွင်တွေ့ရသောပိုလျှံသောဂလူးကို့စ်ကိုထိရောက်စွာလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ဒါကအသည်းကို ketones ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစပြုစေတယ်။
- cortisol level ခေါ်ဝမ်းဗိုက်အဆီဟော်မုန်းများစတင်ကျဆင်းလာလိမ့်မည်။
- စနစ်တကျထိန်းညှိထားသောသိုင်းရွိုက်ဂလင်း (၎င်းသည်သင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်)
- ဤ keto အခြေခံသောအစားအစာစနစ်သည် keto တုပ်ကွေးမရှိသောရိုးရာ keto အစားအသောက်စားသုံးသူများကြုံတွေ့ခံစားနေရသောအရာများဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲမှုကို“ keto ဘေးထွက် - ဆိုးကျိုးများ” မရှိဘဲသင်ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
- အစားအစာသည်ခန္ဓာကိုယ်မှသိုလှောင်ထားသောအဆီများကိုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အဆိုပါအဆီပြိုကွဲသေချာပေါက် ketosis ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
- ၁၄ ရက် keto စိန်ခေါ်မှုသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအစားအစာကို စား၍ ပျော်မွေ့စေသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် ketone ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်၌ရှိနေစဉ်သင့်အားကာဗွန်မြင့်မားသောအစာများမှမိမိကိုယ်ကိုတားဆီးရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်ဘာကြောင့် 14 နေ့ KETO အခက်အခဲမဝယျ:
ဤသည် 14 နေ့ကအစားအသောက်အစီအစဉ်ကိုတိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းအကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးပေးထားပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတစ်သက်တာများအတွက် keto အစားအသောက်များတွင်ချိတ်ဆက်ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျပိုကောင်းနှင့်ပိုမြန်သောရလဒ်များကိုအဘို့ဤအစားအစာသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အချို့သည်နေသောခေါင်းစဉ်:
- သင် keto carbs ပါဝင်သရွေ့သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအမြင့်ဆုံးကာဗွန်မုန့်ညက်ကိုသင်ပျော်မွေ့နိုင်သည်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအသီးကိုစားပါဝင်သည်! သင်ဤအစာကိုအစာစားရန်သင့်တော်သည့်အချိန်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်၊ သင်၏သင်တန်းသည်အပြည့်အဝဖုံးလွှမ်းနေသောသင်၏အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
- ဒီ ၁၄ ရက် keto အခြေခံအစီအစဉ်သည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကန့်သတ်နိုင်သောကြာရှည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိပါ။ ၎င်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိသောရိုးရာ keto အစားအစာနှင့်မတူပါ။
- သင်ဤလမ်းညွှန်ကို PDF format ဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်းချက်ချင်းရယူနိုင်သည်
- သင်အဆီသိုလှောင်မှုကိုတိုးစေပြီးသကြားဓာတ်များများပါစေသောအရက်ကိုရှောင်ခြင်းအားဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံးအရက်ကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။ ယခု ၁၄ ရက်အစီအစဉ်သည်မည်သည့်အရက်ယမကာကိုသင်သောက်သုံးကြောင်းဖော်ပြသည်
- ၎င်း၏“ ပစ်မှတ်ထားသည့် keto ချဉ်းကပ်မှု” ကြောင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်
- သင်ဤပစ်မှတ်ထား keto ချဉ်းကပ်မှုအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်အပြည့်အဝနားလည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်အနှစ်သက်ဆုံးသောအပန်းဖြေမှုများကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပျော်ရွင်နိုင်သည်
- ဤအစီအစဉ်သည်ရေရှည်တွင်လွယ်ကူစွာလိုက်နာရန်လွယ်ကူပြီး၎င်းသည်စံ keto အစားအစာတွင်တွေ့ရသည့်ချို့တဲ့မှုကိုတားဆီးပေးသောဓာတ်သတ္တုများ၊ အာဟာရများနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
- ၁၄ ရက်ကြာစိန်ခေါ်မှုသည်သင်မည်သည့်နည်းနှင့်မကျေနပ်ပါကနေ့ ၆၀ ပြည့်အပြည့်ပြန်ငွေကိုအာမခံသောကြောင့်သင်ရှုံးစရာဘာမှမရှိပါ။
ကျနော်တို့ကဒီအစီအစဉ်ကိုသည်ကြီးကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရေရှည်များအတွက်ပိုကောင်း option ကိုကြောင်းထင်ပါတယ်။ သငျသညျအချိန်မရွေးမကြာမီ keto သွားပေါ်စီစဉ်ခဲ့ကြပါလျှင်, ရန်သေချာစေပါ ဒီ 14 နေ့ Keto စိန်ခေါ်မှုထုတ်စစ်ဆေး ပထမအချက်ကအန္တရာယ်နည်းပါးပြီးရလဒ်တွေကိုအာမခံပေးလို့ပါ။ ယနေ့သင်မှာယူပါကသင်၏အမှာစာနှင့်အခမဲ့လက်ဆောင် ၄ ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလမ်းညွှန်၊ keto snacks နှင့် hacks၊ cheat sheet လမ်းညွှန်နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်ခြင်းအသေးစိတ်အစီအစဉ်များပါ ၀ င်သည့်အပိုဆုကြေး eBooks ၄ ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။